Multi-inhibetric ibhedi B-45
B-45 I-Multi-function obstetric bed bed size: 1800 (L) × 600 (W) × 650/895 (H) mm Multi-injongo yeetherbhule yenzelwe ukuhanjiswa, isisu kunye novavanyo lwe-gynecological. Iphawulwa ngokusebenza ngokulula, uqoqosho, ukhuseleko kunye nokuthembeka. Yenziwe ngomgangatho webhedi, indawo yokulala kunye nesiseko sebhedi. Umgangatho webhedi ubandakanya icandelo langemva, icandelo lesihlalo kunye necandelo lomlenze. Ukunyuswa okuphezulu kwecandelo elingasemva kunye nokuhamba phambili komqolo webhedi kulawulwa ngukusebenza kwesondo esinamavili, esenza ...
I-epoxy enamathela kwi-B-43-1 ibhedi
Ubungakanani: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) Iimpawu eziphambili: 1. Isakhelo esidibeneyo se-epoxy, umgangatho ophezulu we-polyurethane mattress; Amacandelo angama-2, ukuphumla umva (kulungiswe intwasahlobo yerhasi), umsebenzi wokuphumla kwamadolo (kulawulwa yinkqubo yomatshini wegiya); 3. Isixhobo esixhasayo umlenze kabini, ngesitya esinye se-SS phantsi kwetafile. Isiseko sonyawo ngeenyawo, inyawo ngerabha yokulwa nengxolo.
Ibhedi engasasebenziyo yentsimbi B-42-1
ubungakanani: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) Eyona nto iphambili: 1. Isakhelo sesinyithi esingenasiseko, umgangatho ophakamileyo we-polyurethane mattress; 2. Amacandelo amathathu, ukuphumla umva (kulungiswe intwasahlobo yerhasi), umsebenzi wokuphumla emadolweni (kulawulwa yinkqubo ye-gear mechanic); 3. Isixhobo esixhasayo umlenze kabini, ngesitya esinye se-SS phantsi kwetafile. Isiseko sonyawo ngeenyawo, inyawo ngerabha yokulwa nengxolo.
I-B-48 C1-standard Configurations kwi-S board head head head head○ head head head head head board board board○ board board board board board board board board head board board○ board board board board board board board board board board board board board board board head board board board board board board 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (2) ○ Imoto (3) ○ Imilenze exhasa (2) gr Imigca yabasebenzi (2) holes Imingxunya yePI yePI (2) central Umbindi ophakathi Ukutshixa i-castors (4) ○ I-castors castling castors （4）
B-48A1 Igumbi le-LDR ligumbi elinye labasebenzi, ukuhambisa, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, kunye nomva kokubeleka (LDRP). Isixhobo sale bhedi silungele zonke iinkqubo zokuzala kunye nokuhanjiswa ngaphandle kwecandelo le-cesarean kunye nokuhanjiswa ngokubanzi kwe-anesthesia. Onke amagumbi anikezela ngenkonzo eyilelwe yonke inkqubo yokuhanjiswa ukusuka ekuzalweni ukuya emva kokukhulelwa kunye nokunakekelwa kwasemva kokubeleka, kwaye iyakwazi ukujongana neengxaki ezininzi. Umbhede we-LDR, njengezixhobo eziphambili kwigumbi elinye unokuhlengahlengiswa ngokupheleleyo ukulungiselela ukumiselwa kwangaphambili kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhambisa ...